Aniga oo ah (15 sanno jir) waxaan jeclahay in aan u diro wiil saaxiibkayga ah sawir qaawan oo aniga ah. Sawirka aniga waxaa iga qaawan naasaha mana xirni wax rajabeeto ah. Gabdhaha saaxiibadayda ahi waxay igu dhahaan waa in aanan sidaasi samaynin. Ma jirtaa sabab iga dhagaysa in aanan sidaasi samaynin? – Tips for refugees
Previous Previous post: Aniga oo ah (gabar, 14 jir ah) waxaa igu dhacay illaa iyo hadda seddex jeer dhiigayga caadada. Marwalba waxaa jiri jirtay hakad ah kudhowaadkii hal bil inta u dhaxaysa. Si kastaba, hadda ma uusan iga imaanin dhiiga afar bilood. Miyaan Xanuunsanahay?
Next Next post: Walaashaydu waa eeyad (waxaan ahay wiil, 16 jir ah). Sidaas ayaan ku iri. Hadda ayada waxay u sheegtay qofka mas’uulka naga ahaa. Wuxuu u arkay luuqada aan isticmaalay in ay tahay mid ‘jinsi ahaan ah’. Asagu wuu caraysanyahay, sax?